Atụmatụ na ụmụaka na Madrid - Nhọrọ kacha mma | Njem zuru oke
na atụmatụ na ụmụaka na Madrid ha nwekwara ike ịbụ ndị dịgasị iche iche. Oge ụfọdụ anyị ga anọdụ n’obodo ahụ ma anyị chere n’obụrụ na ọ nwere ike ịbụụrụ ụmụ ntakịrị nọ n’ụlọ otu ebe. Ọ dịghị ihe nwere ike ịbụ n'ihu si eziokwu! Enwekwara nhọrọ dịgasị iche iche maka ị na -eme onwe gị obi ụtọ kwa ụbọchị.
Ọ bụrụ na ị chọrọ na-emefu ụfọdụ mma ụbọchị ezinụlọ, ma na-eche mgbe niile banyere ọdịmma nke obere ụlọ, ị gaghị echefu nhọrọ niile anyị kpọtụrụ aha. Ga-ahụ otu ha si enwe ọ eachụ oge ọ bụla na ị ga-ahụ ka ha nwere ọ happyụ Tinye ebe ndị a na atụmatụ gị!
1 Roomzọ mgbapụ ma ụdị ezinụlọ
2 Paintball, atụmatụ ya na ụmụaka nọ na Madrid
3 Ogige Europa
4 Ọfụfụ ikuku
5 Nnukwu slide
6 Ilszọ ụkwụ na-eme njem
8 The safari, onye ọzọ nke atụmatụ na ụmụaka na Madrid
Roomzọ mgbapụ ma ụdị ezinụlọ
Ihe a na-akpọ 'Eszọ mgbapụ'. O doro anya na ị maara ha, ọbụnadị igwu egwu mgbe ụfọdụ, ebe ọ bụ na nnukwu obodo ahọrọwo ụzọ a iji mee ka ezinụlọ ahụ dum nwee obi ụtọ. Ọ bụ banyere otu ndị enyi na-abanye n'ime ụlọ ma na-apụ na ya, ha ga-edozi ọtụtụ egwuregwu ma ọ bụ ule na nsogbu. Mana n'ọnọdụ ọ bụla, ha ga-abụ ihe na-atọ ụtọ ma ghara itinye nke ọ bụla n'ime ihe egwu ahụ. Naanị na Torrejón de Ardoz, na ụlọ ahịa ịzụ ahịa Parque Corredor, ị nwere otu. A na-enweta ya site na Tuesday ruo Sunday na ehihie.
Paintball, atụmatụ ya na ụmụaka nọ na Madrid
Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ atụmatụ ọzọ kachasị mma na ụmụaka nọ na Madrid. Dị ka anyị maara nke ọma, ebe a anyị nwere ike iji oge kacha atọ ụtọ ma ọ bụ bịa ememme ụbọchị ọmụmụ. Thatbụ na ọ nwere ike, ọ bụ ihe ọzọ kachasị eme njem. Ebe obu na umuaka yi akwa, uwe aka na nkpuchi nke mere na echekwara ha nke oma. Ha ga-ezo n’azụ mpaghara dị oke egwu iji gbaa mgbe ọ dị mkpa. Ga-esi na Madrid ị ga-ewere A-6 wee pụọ na 47 kwupụta M-600 gaa El Escorial. N'ezie, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịga bọs, ịnwere ike ịnara 664 nke si na Moncloa pụọ ​​wee rute ebe a.
Ọzọ anyị ga-ekwu maka Torrejón de Ardoz, n'ihi na ọ ga-abụ ebe anyị ga-ezute Europe Park. Ọ bụ ogige ntụrụndụ ebe anyị na-aga ịchọta nnọchi anya nke isi ihe ncheta nke Europe. Ihe ga-adọta ndị okenye n’ụlọ. Ma maka ndị na-eto eto ma ọ bụ ụmụaka enwere usoro ihe omume dị iche iche. Enwere akara zip, yana ụgbọ mmiri maka ịgagharị, ịgba ụta ma ọ bụ maze laser. Obi abụọ adịghị ya, nhọrọ zuru oke iji nụ ụtọ ezinụlọ.
Ọ bụ ihe ọzọ nke atụmatụ na ụmụaka na Madrid. Dị ka aha ya na-egosi, ọ bụ ebe ị ga-efe efe, na-enweghị ịdị elu puku kwuru puku. Nke a bụ ahụmịhe ikuku na mbara igwe mana n'ime ụlọ. Nke mbu ileba anya ga-ekwu okwu na akụrụngwa niile maka oge a. Ọ bụ eziokwu na ọ naghị adịte aka, mana ọ bụ ihe anyị ga-anwale. Ysmụ nwoke na ụmụ agbọghọ nwere ike ịbanye site na afọ anọ. Ọ dị n'ihu ebe a na-azụ ahịa na Islazul.
Ọ bụrụhaala na ọ naghị ekpo oke ọkụ, nke a bụ usoro ọzọ zuru oke maka ụtụtụ ma ọ bụ ehihie na ụmụntakịrị nọ n'ụlọ. Dịkarịa ala, ọ ga-abụ otu n'ime ọkacha mmasị gị. Ọ na-elekwasị anya na nnukwu slides atọ anyị ga-ahụ na Ogige Felipe VI. N'elu ụzọ ndị agha. Ga-ahụ etu ihu ha ga-esi gbanwee mgbe ha huru oke ihe mmịfe ndị a. Mana nke ahụ abụghị ihe niile, mana ịrịgo ha, ha ga-agabiga ụfọdụ ndekọ na ụgbụ, nke ebubere maka iji nke kacha nta n'ụlọ.
Ọzọ, mgbe okpomọkụ na-enye anyị ohere, mee a ụzọ njem ọ nwekwara ike ịbụ nnukwu atụmatụ. N'ezie, mgbe gị na ụmụaka ma ọ bụ ndị nọ n'afọ iri na ụma na-aga, ọ kachasị mma ịhọrọ mgbe ụfọdụ maka ụfọdụ dị mfe ma dị mkpụmkpụ. Ya mere na emesịa ị nwere ike ezumike, nwee nri na mpaghara dị jụụ ma nwee ọfụma ije kwesịrị ekwesị. Maka ya, ị ga-ahụ ebe zuru oke ị ga-enwe mmasị na ya.
Oghere a ga-abụ atụmatụ ọzọ na ụmụaka na Madrid. Ọ bụ obodo, nke nwere ọrụ niile dị mkpa na ya, dịka nnukwu ụlọ ahịa, ngalaba ọkụ, ụlọ ezumezu obodo, wdg, mana ihe niile dịka ụmụ aka. Bụ a oge ezumike, nke ha na-etolite ma na-arụ ọrụ dị ka ndị a. Echiche zuru oke maka afọ 4 ruo 14. Oghere niile nwere ese foto nchekwa ma ha ga-adị mma. Ndị nne na nna ga-abụ ndị njem na nke a, ha nwekwara ike ịnụ ụtọ nnukwu atụmatụ na San Sebastián de los Reyes.
The safari, onye ọzọ nke atụmatụ na ụmụaka na Madrid
Gaghị mkpa ịhapụ isi obodo inwe ike nwee safari. Maka na Madrid ị nwere otu. With ga-ejikọ ụgbọ ala gị ma nwee mmasị na anụmanụ niile ị nwere gburugburu gị. Ma agụ na ọdụm, nnụnụ ma anụ ndị na-akpụ akpụ ga-enwere onwe ha na mpaghara ahụ. Ndị okenye na-akwụ ụgwọ euro 18, ebe ụmụaka 14 euro. A njegharị na ị nwekwara ike mezue na-enye nke karts na nnukwu slides na ndị nọ n'ógbè ahụ. Ga - ahụ ya n'okporo ụzọ awara awara Navalcarnero, na Aldea del Fresno.
Ifufe tunel image: www.windobona.es
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Atụmatụ na ụmụaka na Madrid
Malọ nke Colomares